Mpanamboatra lasitra sotro / fork / antsy | Shina / Fork / antsy bobongolo orinasa & mpamatsy
Lovia kely / fork / antsy lasitra azo zaraina amin'ny sokajy samihafa arakaraka ny fitaovany, ny endriny, ny lamina, ny fampiasana azy:
Araka ny akora vokatra samihafa dia azo zaraina roa PP lovia kely bobongolo, PS lovia kely bobongolo, Bobongolo fork PP, Bobongolo fork PS, Lasitra antsy PP, Lasitra antsy PS, Lasitra sotro PLA, Bobongolo fork PLA, Lasitra antsy PLA, sns.;
Araka ny endrik'ireo vokatra isan-karazany dia azo zaraina izany kiho lovia kely bobongolo, Bobongolo forkongo, Lasitra antsy kiho, sns.;
Araka ny lamin'ny vokatra samihafa dia azo zaraina izany Glossy lovia kely bobongolo, Bobongolo fork glossy, Lasitra antsy glossy, Frosted lovia kely bobongolo, Bobongolo forkitra, Lasitra antsy, sns.;
Araka ny fampiasana isan-karazany dia azo zaraina roa izy io Sotro azo esorina bobongolo, Antsy azo ariana bobongolo, Fitaovana azo ampiasaina bobongolo, Lasitra fork voankazo, Lasitra antsy mofomamy, Ny forkety dia afaka mamolavola, sns.
Heya Mould dia mifantoka amin'ny famokarana sy ny fampandrosoana ny lasitra sotro / fork / antsy, ary mijery ny fisafidianana sy ny toerana misy ny vy sotro / fork / antsy, rafitra fanamafisana, tsipika fisarahana, hatevin'ny rindrina, fametahana, sns. ho an'ny antsipiriany bebe kokoa.
Lasitra antsy lohana sotro
Bobongolo plastika azo esorina
Bobongolo plastika plastika maro rongony
Bobongolo tsindrona plastika
Plastika tsindrona plastika fork an-tabilao Mould